अभिनेत्री सारा अलीलाई फ्यानको प्रश्न : 'भाइसँग यस्तो गर्न तिमीलाई लाज लाग्दै ? ' - अभिनेत्री सारा अलीलाई फ्यानको प्रश्न : 'भाइसँग यस्तो गर्न तिमीलाई लाज लाग्दै ? ' -
अभिनेत्री सारा अलीलाई फ्यानको प्रश्न : ‘भाइसँग यस्तो गर्न तिमीलाई लाज लाग्दै ? ‘
उज्यालो प्रतिनिधि २६ फाल्गुन २०७६, सोमबार सम्पादकीय
मुम्बइ। बलिउड अभिनेत्री सारा अली खानले सामाजिक संजालमा बोल्ड फोटोहरु शेयर गरिरहन्छिन् । तर, उनको हालैको एक पोटले भने आलोचना खेप्नु परेको छ । पछिल्लो समय साराले बिकिनीमा भाइसँग फोटो शेयर गरेकी थिइन् । विदा मनाउन माल्दिभ्स पुगेकी साराले उत्तैबाट फोटो शेयर गरेकी हुन् ।
भाइलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै उनले बिकिनीसहितको तस्वीर शेयर गरेपछि यसको आलोचना भएको हो । प्रशंसकहरूले भाइलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन साराले अर्कै तस्वीर राख्नुपर्ने बताएका छन् । भाइसँग यस्तो अवस्थाको तस्वीर खिच्नु गलत भएको धेरै प्रयोगकर्ताको भनाइ छ । एकजनाले त ‘तिमीलाई लाज लाग्दैन’ भनेर समेत टिप्पणी गरे ।